डा. केसीको जीवन रक्षा माग गर्दै जनकपुरमा प्रदर्शन – AayoMail
डा. केसीको जीवन रक्षा माग गर्दै जनकपुरमा प्रदर्शन
आयाेमेल संवाददाता २०७७ असोज २१ गते १७:५९
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका माग गर्दै जनकपुरमा प्रदर्शन भएको छ। पछिल्लो २४ दिनदेखि अनशनरत डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको भन्दै स्थानीय युवाहरूले बुधबार जनकपुरमा प्रदर्शन गरेका हुन्।
महेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठान अन्तर्गतको कोभिड क्विक रेस्पोन्स टीम तथा स्थानीय युवाहरूको आयोजनामा भएको प्रदर्शनका सहभागीहरूले तत्काल वार्ता गरेर डा.केसीको जायज मागहरू पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
‘हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा, हामी सबै डा.केसीको साथमा’ नारासहित प्रदर्शनमा उतरेका युवाहरूले स्वास्थ्य शिक्षा सुधार जस्तो महत्वपूर्ण माग राखेर अनशनमा रहेका डा. केसीसँग संवादसमेत नगर्ने सरकार तानाशाहीतर्फ उन्मुख भइरहेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।
आमनागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर अनशनमा रहेका डा.केसीको माग सम्बोधनगर्न तर्फ सरकारले चासो नदेखाएपछि युवाहरूले प्रदर्शन गरेको तरुण दल धनुषाका उपसभापति राकेश विक्रम साहले बताए। सरकारले तत्काल वार्ता गरेर केसीले उठाएको माग सम्बोधन नगरे आफूहरू सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने साहले चेतावनी दिएका छन्।
तीन सातादेखि अनशनमा रहेका डा. केसीको माग सम्बोधन नगरेर सरकारले दम्भ देखाएकोले दबाबस्वरुप प्रदर्शन गरेको युवा चन्दन रायले बताए।
प्रदर्शनमा सम्झना वर्मा, युवा अभियानी सरोज मिश्र, दीपक ठाकुर, बलराम साह, किसन साहलगायतका दर्जनौं युवाहरूको सहभागिता रहेको थियो।